Kalkuleetarka Bit - Beddelaan yara, byte, kilobit, kilobyte, megabit, megabyte, gigabit, gigabayt iyo more ...
beddelaad Ake dhexeeya bit, bytes, kilobits, kiiloobayt, megabiiti, megabytes, gigabits, gigabayt, terabits, terabytes, petabits, petabytes, exabits, exabytes, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes
Nooca bit - b Byte - B Kilobit - Kb Kilobyte - KB Megabit - Mb Megabyte - MB Gigabit - Gb Gigabyte - GB Terabit - Tb Terabyte - TB Petabit - Pb Petabyte - PB Exabit - Eb Exabyte - EB Zettabit - Zb Zettabyte - ZB Yottabit - Yb Yottabyte - YB
Band balladhka (Kilo = 1000 bits)
Shaxan Qaab beddelidda
Qoraalada:Qiimaha K (Kilo) inta lagu jiro xisaabinta qaadan kartaa laba qiyamka 1024 ama 1000, waxay ku xiran tahay nooca xisaab aad rabto in aad u qabtaan. Iskuday inaad isticmaashid K = 1024 marka aad ayaa ka fiirsaneysa inay awoodda kaydinta in in disk adag, DVDs, flash drives ama aaladaha kale ee warbaahinta oo lagu kaydiyo. K = 1000 waa in la isticmaalo marka aad ka fekereyso inaad dhex, ie xawaaraha at kaas oo macluumaad la wareejiyay.
Tusaale: Haddii aad computer leedahay 1 KB of boos disk waa ayaa sheegay in uu 1024 B of boos, hadda dhex kaarka network yahay 1 KB/s ka dibna waxa la sheegay in ay u gudbiya xogta illaa 1000 B/s.
Isticmaalka: Ku qor qiimaha iyo unit oo guji badalo, kalkulayta waxay samayn doonaan qaab beddelidda in dhamaan qeybaha.
"Waxaan ku siin xisaabiyayaal la xiriira adduunka kombiyuutarka."